Zon’ny vehivavy: misy ireo miady mba ho ara-dalana ny fanalan-jaza | NewsMada
Zon’ny vehivavy: misy ireo miady mba ho ara-dalana ny fanalan-jaza
Hifarana anio etsy Antaninarenina ny atrikasa iray, heverina fa manan-danja sy hampiova zavatra betsaka eo amin’ny fiainam-piarahamonina. Tsy inona izany fa ny fametrahana tambajotra nasionaly ho an’ny fanalalahana ny fanalan-jaza eto Madagasikara.
Voalaza fa antony faharoa mahatonga ny fahafatesan’ny reny, ny fahaverezan-dra be loatra, noho ny fanalan-jaza tamin’ny fomba tsy voaaro. Araka ny fanadihadian’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, tamin’ny taona 2017, miisa 75.000 isan-taona ny fanalan-jaza eto amintsika. Hatreto, mbola toy ny famonoana olona ny fanalan-jaza na ny fampiatoana ny fitondrana vohoka eto amintsika ary voaheloky ny lalàna. Tsy ara-dalàna koa ny fanalan-jaza vokatry ny fanolanana na ny faneren’ny havana, mety hitondra voka-dratsy ho an’ilay vehivavy, aza izany.
Manoloana izany, misy sokajin’olona, mihevitra sy resy lahatra fa tokony halalahana ny fanalan-jaza, noho ireo antony ireo. Manatanteraka ity atrikasa ity izy ireo ary, ahitana vehivavy sy lehilahy 35 ka avy any amin’ny faritra ny 6. Tanjona ny hanangon-kevitra, ahafahan’ny tsirairay amin’izy ireo mandresy lahatra ny hafa, hiara-kiady amin’izy ireo, any amin’ny faritra misy azy tsirairay avy. Izany hoe, heverin’izy ireo ny hanangana tambajotra nasionaly, hiady ho an’ny fanalalahana ny fanalan-jaza. Tafajoro, ny volana febroary 2018 ny hetsika antsoina hoe « Nifin’Akanga ». Milaza izy ireo fa voahitsakitsaka ny zon’ny vehivavy hanao ny tiany hatao amin’ny vatany. Ny hiady ho an’ny fampanajana io zo io no tanjon’izy ireo, amin’ny alalan’ny fandresen-dahatra , hiara-kiady amin’izy ireo.